Praiminisitra Ntsay Christian: “Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ny firenena” - ewa.mg
Praiminisitra Ntsay Christian: “Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ny firenena”
News - Praiminisitra Ntsay Christian: “Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ny firenena”
governemanta, nanoloana ireo depiote tamin’ny alalan’ny
“visioconference”, omaly ny tetikasa nataon’ny fitondrana. Na izany
aza, nisehoana olana ihany izany.
Navoitrany tamin’izany fa tokony ho
hitan’ireo depiote any amin’ny toerana nahavoafidy azy ireo izany
tetikasa izany. Hitan’ny vahoaka koa. Niaiky anefa ny tenany fa
misy ny lesoka. “Azontsika atao ny mandrefy ny ezaka hitondrana
vahaolana, hanarenana ny vokatry ny fahatarana maro teto amin’ny
firenena. Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ity firenena
iombonana ity”, hoy izy.
25 tapitrisa Ar isaky ny
Notanisainy tamin’izany ny asa vita
ho an’ny fitsinjaram-pahefana ny fanampiana ara-bola, 210 tapitrisa
Ar isan-taona ho fampandehan-draharaha eny anivon’ny faritra.
Hisitraka famatsiam-bola (CIAD), 250 tapitrisa Ar ny distrika
raha 500 tapitrisa Ar isan-taona kosa izany ho an’ireo manana
depiote roa. Nomena fanampiana ho fampandehanan-draharaha, 25
tapitrisa Ar avy ireo kaominina raha 15 tapitrisa Ar izany teo
aloha. Mbola hisy koa ny tetibola fanampiny ho an’ireo kaominina
manana mponina mihoatra ny 5 000. Tohizana ny
famatsiam-bola hanatanterahana fotodrafitrasa, tohanan’ny banky
iraisam-pirenena ho an’ny kaominina, mitentina 30 tapitrisa Ar.
Tahaka izany koa ny fandoavana ny latsakemboky ny CNaPS tsy
voaloa eny amin’ny kaominina. “Manamaivana ny vesatra ho an’ny
tetibolan’ny kaominina ny fandoavan’ny fanjakana ireny latsakemboka
tsy voaloa ireny ary ahafahan’ny mpiasan’ny kaominina misitraka ny
zony”, hoy izy.
Ankoatra izany, namaly ny
fanakianan’ny depiote momba ny voka-pifidianana ben’ny Tanàna
farany teo ny praiminisitra. Nambarany fa hohatsaraina izany mba
hipetrahan’ny fifampitokisana ary hanao ezaka ny fitsarana. Na
izany aza, nohitsiny fa tsy azo ekena ny voka-pifidinanana
mifamadika. Ohatra, lasa voafidy tampoka ny kandidà iray mahazo
vato 500 raha 5 000 ny vato azon’ny kandidà iray hafa.
Tsiahivina fa niompana amin’ny
teboka maromaro ny lahatenin’ny praiminisitra. Anisan’izany ny ady
amin’ny covid-19, ny fitantanana, ny filaminana sy
fandriampahalemana. Eo koa ny toekarena sy ny fotodrafitrasa ary ny
L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ny firenena” a été récupéré chez Newsmada.
Vinany: tratra ireo jiolahy mpangalatra moto
Voasambotry ny polisy ireo jiolahy tompon’antoka tamina halatra moto teny amin’ny sampanana Vinany Ambohijanamasoandro Itaosy. Nametraka fitoriana teny amin’ny CSP Itaosy ny tompon’ilay moto very, ny oktobra 2018 lasa teo. Ny 30 novambra 2018 lasa teo, hita tany Ambaniala Itaosy ilay moto very ka nampilaza haingana tamin’ny polisy ny tompony. Noraisim-potsiny ny jiolahy taorian’ny fidinana tampoka nataon’ny polisy. Tadidin’ilay mpitory izy roa lahy ireto raha vao hitany satria izy ireo no nisandoka azy tamin’ny fotoana nahavery ilay moto. Efa natolotra ny fitsarana ny raharaha ka naiditra am-ponja vonjimaika izy ireo. Ny 5 desambra 2018, nahazo antso avy amin’ny andrimasom-pokonolona teny Ambohijafy Ampasika Itaosy ny polisy ka tamin’izany no nahafantarana fa misy olona telo mampiahiahy nitondra sakaosy. Rehefa nosavaina izy telo lahy ireto dia nisy fanalahidy maroanaka sy baraminina ary entana fampiasa an-dakozia tany amin’izy ireo. Nentina natao famotorana izy ireo ka niaiky ny heloka vitany ary nilaza fa avy namaky trano. J.C L’article Vinany: tratra ireo jiolahy mpangalatra moto a été récupéré chez Newsmada.
Marc Ravalomanana a du mal à réfréner ses ambitions. « J’ai encore une mission pour le pays », a-t-il déclaré, samedi dernier. Contrairement à ce que d’autres croient, l’ancien président ne compte pas encore jeter l’éponge, ni quitter l’arène politique. Après cette déclaration, le nuage qui planait sur sa présence lors de la prochaine élection présidentielle commence alors à se dissiper peu à peu. Même si l’échéance est encore lointaine, le camp de Marc Ravalomanana et ceux de ses partisans de l’opposition veulent déjà affirmer leur présence sur terrain. L’ancien président multiplie les sorties politiques en faisant, ces dernières semaines, le tour de certains marchés communaux. Samedi dernier, l’ancien président était au marché communal de Sabotsy Namehana, dans le district d’Avaradrano, avant de se rendre sur le site historique du Rova d’Ambohimanga. Il prend ainsi le relais des périples initiés par les parlementaires des partis Tiako i Madagasikara et Hery vaovao ho an’i Madagasikara. Rija R. L’article Marc Ravalomanana : « J’ai encore une mission pour le pays » est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Marc Ravalomanana : « J’ai encore une mission pour le pays » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Vehivavy 10 isan’andro no maty am-piterahana, ny telo amin’ireo dia tanora 15 ka hatramin’ny 19 taona, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny UNFPA raha ny taona 2018 no resahana. Ao anatin’ny fiarahamiasa nosoniavin’ny Fondation Axian sy ny UNFPA ny fandefasana “clinique mobile” amin’ireo toerana tena mila izany. Ny Fisa Madagasikara no miandraikitra ny tolotra momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny firaisana ara-nofo. Ny Akany Iarivo Mivoy, mandray ireo tsy manan-kialofana eny Anosizato no misitraka izany voalohany. Ho fampihenana ny taham-pahafatesan’ny reny eo am-piterahana, amin’ny alalan’ny fanamorana ny fikarakarana tsara kalitao sy maimaim-poana ny lafin’ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana no tanjon’ity fiarahamiasa ity”, hoy Rajemison Dina, tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny Fondation Axian. Mifanindran-dalana amin’ny fankalazana ny herinandron’ny fampiasana fanabeazana aizana, hetsika voalohany nataon’ny roa tonta ny fanomezana tolotra momba ny fanabeazana aizana ho an’ireo mipetraka ao amin’ny Akany Iarivo Mivoy. Lehilahy, vehivavy, tanora maherin’ny 100 no nentanina momba ny vokatsoa azo avy amin’ny fampiasana ireo karazana fanabeazana aizana. Nahazo vaovao momba ny fahasalamana ara-panahanana ihany koa izy ireo izay anisany zo fototra. Nirina R. Cet article MIAHY JOVENA : Nanombohana ny fampiasana ny « clinique mobile » tao amin’ny Akany Iarivo Mivoy est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article MIAHY JOVENA : Nanombohana ny fampiasana ny « clinique mobile » tao amin’ny Akany Iarivo Mivoy a été récupéré chez Délire Madagascar.
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 Isan’ny nanaovana fitiliana: 202 Tranga vaovao: 24 17 Analamanga 4 Matsiatra Ambony 3 Amoron’i Mania Sitrana: 122 Tranga misy fahasarotana: 142 Namoy ny ainy: 02 02 Analamanga L’article COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
HCDDED: “Inona ny hetahetam-bahoaka ?”
“Vita iny ny fifidianana solombavambahoaka. Na ambany aza ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy, isaorana avokoa ireo nandray anjara tamin’iny. Tsy nisy ny korontana sy ny tabataba. Miandrandra zava-baovao hatrany ny vahoaka amin’ny fifidianana.”Io ny fanambaran’ny Filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED), tarihin’ny filohany, i Pierre Lenoble Navony, afakomaly.Ny vahaolana amin’izay fiandrandran’ny vahoaka zava-baovao hatrany izay amin’ny fifidianana, tokony hampiseho hetahetam-bahoaka ny fitondrana amin’izao fotoana izao: inona ny hetahetam-bahoaka? Ny fandriampahalemana; ny fandrosoana toekarena; ny filaminana amin’ny ankapobeny toy ny filaminana amin’ny sakafo, amin’ny asa sy ny toeram-piasana; ary ny fanarahan-dalàna.“Izay ny andrasan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Voahaja sy atao ve izay?”, hoy izy. Tsy misy fanilikilihana ny Malagasy rehetra amin’izany.R.Nd.L’article HCDDED: “Inona ny hetahetam-bahoaka ?” a été récupéré chez Newsmada.